122s &#39;Robert Forster ကိုဘာမှားယွင်းအောင်လုပ်တာလဲ&#39; BTS | အယ်လ်ကင်နို images and subtitles
-Hey, ရဲ့ ... - ကောင်းပြီ, ငါတို့လှိမ့်နေကြသည် EPK အပေါ်။ -Rolling! Forster: သူတို့ကမင်းကိုဖုန်းခေါ်ပြီးပြောတယ် Vince Gilligan ကသင့်ကိုအခြားစီမံကိန်းတစ်ခုတွင်ပါဝင်စေလိုသည်။ ပြီးတော့လူတိုင်းက "ကောင်းပြီ" လို့ပြောတယ် ထုတ်ကုန်ကောင်းပါတယ် သို့သော်သင်၏ Kirby ကိုချစ်နေလျှင်၊ ငါအလောင်းအစားငါနောက်တဖန်သင်တို့အဘို့အအလုပ်လုပ်ရနိုင်အလောင်းအစား။ လူတွေမကြာခဏငါ့ထံသို့လာကြ၏ "Breaking Bad" ပါ။ ပြောပါ ထိုအခါငါသာဇာတ်လမ်းတွဲအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်thingရာအရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းအခြားကောင်းသောအရာစုံတွဲတစ်တွဲရှိခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့် "Breaking Bad" ကတော့ကြီးကျယ်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဟူးဗားထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ မင်းနောက်ကွယ်ကနံရံပေါ်မှာ။ ကြည့်၊ ငါမမှတ်မိဘူး စကားဝှက်အတိအကျ၊ ဒါပေမယ့်ဒါဟာလေဟာနယ်အရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာငါတို့လုပ်နေတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့စီမံကိန်းပါ။ အာရုန်သည်ဤထုတ်လုပ်မှုတွင်ကြယ်ပွင့်ကြီးဖြစ်သည်။ သူဟာသူ့အကြောင်းကိုသူပုံပြင်ရနေတာကိုကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်။ ဒီဟာကိုပဲစကားလုံးတွေလို့ပဲထင်တဲ့သရုပ်ဆောင်တွေကိုကျွန်တော်သတိရတယ်။ ဒါကအမူအကျင့်နဲ့အချိန်ကိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။ ဒီ ... ယခင်ကအကြွေးဖြစ်ပါတယ်။ သင်ထည့်သွင်းမည့်နောက်တိပ်တွင်သင်မျှော်လင့်ပါသည် မင်းလုပ်ခဲ့တာတွေအားလုံးက သင့်ကိုမေးကောင်းမေးနိုင်သောအသစ်သောအရာများဖြင့်။ နည်းနည်းကံကောင်းတာကမင်းကိုမကြာခင်သင်တွေ့လိမ့်မယ်။ မင်းနားမလည်ဘူး ... ဒီကနေအများကြီးမိုင်။ မင်းကိုဘုရားသခင် သင်ကြိုးစားရန်ပစ္စည်းကိုပို့ဆောင်ပါ အထက်ကရေးထားသည်အတိုင်း၊ တန်ဖိုးရှိလိမ့်မယ်တစ်ခုခု ပုံထဲမှာရိုက်ချက်ချပြီး။ Jesse: <i>သဘောတူညီချက်တစ်ခုလား။</i> <i>ခင်ဗျားရဲ့စကားကခင်ဗျားရဲ့နှောင်ကြိုးလား။</i> [ရှူသွင်းခြင်း] ဒါဟာဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းသောနေ့ပါ။ ♪♪
&#39;Robert Forster ကိုဘာမှားယွင်းအောင်လုပ်တာလဲ&#39; BTS | အယ်လ်ကင်နို
< start="0.466" dur="1.635"> -Hey, ရဲ့ ... - ကောင်းပြီ, ငါတို့လှိမ့်နေကြသည် >
< start="2.101" dur="2.036"> EPK အပေါ်။ -Rolling! >
< start="4.137" dur="2.302"> Forster: သူတို့ကမင်းကိုဖုန်းခေါ်ပြီးပြောတယ် >
< start="6.439" dur="4.037"> Vince Gilligan ကသင့်ကိုအခြားစီမံကိန်းတစ်ခုတွင်ပါဝင်စေလိုသည်။ >
< start="10.476" dur="3.537"> ပြီးတော့လူတိုင်းက "ကောင်းပြီ" လို့ပြောတယ် >
< start="14.013" dur="1.635"> ထုတ်ကုန်ကောင်းပါတယ် >
< start="15.648" dur="2.703"> သို့သော်သင်၏ Kirby ကိုချစ်နေလျှင်၊ >
< start="18.351" dur="2.835"> ငါအလောင်းအစားငါနောက်တဖန်သင်တို့အဘို့အအလုပ်လုပ်ရနိုင်အလောင်းအစား။ >
< start="21.186" dur="2.003"> လူတွေမကြာခဏငါ့ထံသို့လာကြ၏ >
< start="23.189" dur="2.703"> "Breaking Bad" ပါ။ ပြောပါ >
< start="25.892" dur="1.969"> ထိုအခါငါသာဇာတ်လမ်းတွဲအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ >
< start="27.861" dur="3.836"> ဒါဟာငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်thingရာအရာဖြစ်ခဲ့သည်။ >
< start="31.697" dur="1.736"> ငါသည်လည်းအခြားကောင်းသောအရာစုံတွဲတစ်တွဲရှိခဲ့ပါတယ်, >
< start="33.433" dur="2.769"> ဒါပေမယ့် "Breaking Bad" ကတော့ကြီးကျယ်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ >
< start="36.202" dur="1.936"> ဟူးဗားထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ >
< start="38.138" dur="1.901"> မင်းနောက်ကွယ်ကနံရံပေါ်မှာ။ >
< start="38.138" dur="1.901"> ကြည့်၊ ငါမမှတ်မိဘူး >
< start="40.039" dur="2.135"> စကားဝှက်အတိအကျ၊ >
< start="42.174" dur="1.502"> ဒါပေမယ့်ဒါဟာလေဟာနယ်အရာဖြစ်ခဲ့သည်။ >
< start="43.676" dur="3.204"> ဒါဟာငါတို့လုပ်နေတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့စီမံကိန်းပါ။ >
< start="46.88" dur="3.269"> အာရုန်သည်ဤထုတ်လုပ်မှုတွင်ကြယ်ပွင့်ကြီးဖြစ်သည်။ >
< start="50.149" dur="3.771"> သူဟာသူ့အကြောင်းကိုသူပုံပြင်ရနေတာကိုကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်။ >
< start="53.92" dur="2.702"> ဒီဟာကိုပဲစကားလုံးတွေလို့ပဲထင်တဲ့သရုပ်ဆောင်တွေကိုကျွန်တော်သတိရတယ်။ >
< start="56.622" dur="3.537"> ဒါကအမူအကျင့်နဲ့အချိန်ကိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။ >
< start="60.159" dur="3.237"> ဒီ ... >
< start="63.396" dur="2.169"> ယခင်ကအကြွေးဖြစ်ပါတယ်။ >
< start="65.565" dur="2.97"> သင်ထည့်သွင်းမည့်နောက်တိပ်တွင်သင်မျှော်လင့်ပါသည် >
< start="68.535" dur="2.201"> မင်းလုပ်ခဲ့တာတွေအားလုံးက >
< start="70.736" dur="2.936"> သင့်ကိုမေးကောင်းမေးနိုင်သောအသစ်သောအရာများဖြင့်။ >
< start="73.672" dur="3.605"> နည်းနည်းကံကောင်းတာကမင်းကိုမကြာခင်သင်တွေ့လိမ့်မယ်။ >
< start="77.277" dur="2.335"> မင်းနားမလည်ဘူး >
< start="77.277" dur="2.335"> ... ဒီကနေအများကြီးမိုင်။ >
< start="80.879" dur="1.67"> မင်းကိုဘုရားသခင် >
< start="82.549" dur="2.602"> သင်ကြိုးစားရန်ပစ္စည်းကိုပို့ဆောင်ပါ >
< start="85.151" dur="2.135"> အထက်ကရေးထားသည်အတိုင်း၊ >
< start="87.286" dur="1.868"> တန်ဖိုးရှိလိမ့်မယ်တစ်ခုခု >
< start="89.154" dur="1.802"> ပုံထဲမှာရိုက်ချက်ချပြီး။ >
< start="90.956" dur="1.369"> Jesse: သဘောတူညီချက်တစ်ခုလား။ >
< start="92.325" dur="3.47">ခင်ဗျားရဲ့စကားကခင်ဗျားရဲ့နှောင်ကြိုးလား။ >
< start="95.795" dur="2.635"> [ရှူသွင်းခြင်း] ဒါဟာဖြစ်ပါတယ်။ >
< start="98.43" dur="1.602"> ကောင်းသောနေ့ပါ။ >